192.168.8.1 - Mitemo uye Maitiro
Aya mazwi uye mamiriro anoratidzira iyo mirau nemirau yekushandiswa kwe 192.168.8.1's Webhusaiti, iri pa https://19216881.one/.
Nekuwana iyi webhusaiti isu tinofungidzira kuti unobvuma aya mazwi nemamiriro. Usaenderere mberi kushandisa 192.168.8.1 kana iwe usingabvumire kutora ese mazwi uye mamiriro akataurwa pane ino peji. Mitemo yedu neMamiriro zvakagadzirwa nerubatsiro rweiyo Terms and Conditions Generator uye Mahara Mitemo & Maitiro jenareta.
Izwi rinotevera rinoshanda kune aya maMitemo neMamiriro, Chakavanzika Chirevo uye Chiziviso Chezvinorehwa nezvibvumirano zvese: "Mutengi", "Iwe" uye "Wako" zvinoreva iwe, munhu anonyora pawebhusaiti ino uye anoenderana nemitemo nemamiriro eKambani. "Iyo Kambani", "Isu pachedu", "Isu", "Yedu" uye "Isu", zvinoreva Kambani yedu. "Bato", "Mapato", kana "Isu", zvinoreva kune vese Mutengi uye pachedu. Mazwi ese anoreva kupihwa, kugamuchirwa uye kufunga kwekubhadhara kunodiwa kuti utore nzira yekubatsira kwedu kuMutengi nenzira yakanyatsokodzera yechinangwa chaicho chekuzadzisa zvido zveMutengi maererano nehurongwa hwekambani zvakataurwa, zvinoenderana uye pasi pemutemo wakakurumbira weNetherlands. Chero kushandiswa kweshoko riri pamusoro apa kana mamwe mazwi muhumwe, muuzhinji, capitalization uye / kana iye / ivo kana ivo, zvinotorwa sekuchinjana uye nekudaro sekureva zvakafanana.
Isu tinoshandisa iko kwemakuki. Nekuwana 192.168.8.1, iwe wakabvuma kushandisa makuki uchibvumirana neiyo 192.168.8.1's Chakavanzika Policy.
Nzvimbo dzakawanda dzekushandurudza dzinoshandisa makiki kuti tibvone kuwana tsanangudzo yemuvakirwo kwekushanya kwega. Cookies inoshandiswa newebsite yedu kuti zvibatsire kushanda kweimwe nzvimbo kuti zvive nyore kuvanhu vanoshanyira webhusaiti yedu. Vamwe vekubatana navo / vanobatana navo vanogonawo kushandisa makiki.
Kunze kwekunge zvataurwa neimwe nzira, 192.168.8.1 uye / kana marezinesi ayo ane kodzero dzedzimba dzezvinhu zvese pa 192.168.8.1. Kodzero dzese dzepfuma dzakachengetedzwa. Unogona kuwana izvi kubva pa192.168.8.1 kuti iwe pachako ushandise zvakaiswa pazvirango zvakaiswa mune aya mamiriro uye mamiriro.
Dzorerazve zvinyorwa kubva muna 192.168.8.1
Tengesa, roja kana sub-rezenisi zvinhu kubva 192.168.8.1
Berekazve, dzokorora kana kuteedzera zvinhu kubva muna 192.168.8.1
Goverana zvirimo kubva muna 192.168.8.1
Ichi Chibvumirano chichatanga musi weiyi.
Zvikamu zvewebsite ino zvinopa mukana kune vashandisi kutumira uye kuchinjana maonero uye ruzivo mune dzimwe nzvimbo dzewebsite. 192.168.8.1 haina kusefa, kurongedza, kushambadzira kana kuongorora Mhinduro pamberi pekuvapo kwavo pawebhusaiti. Makomendi haaratidze maonero nemaonero e192.168.8.1, vamiririri uye / kana vanobatana. Makomendi anoratidza maonero uye maonero emunhu anotumira maonero avo nemaonero. Kusvika pamwero unobvumidzwa nemitemo inoshanda, 192.168.8.1 haizovi nemhosva kune maComments kana kune chero chinobhadharisa, kukuvara kana mari yakakonzerwa uye / kana kutambura semhedzisiro yekushandisa uye / kana kutumirwa uye / kana kuoneka kweMakomendi. pane ino webhusaiti.
Iwe unofanirwa uye unomirira izvozvo:
Iwe unofanirwa kutumira Mazwi pane webhusaiti yedu uye une zvikwata zvose zvinodiwa uye unobvuma kuita saizvozvo;
Mashoko acho haasviki chero upi zvake wepfungwa zvakakodzera, kusanganisira pasina mvumo yekodzero, kodzero yepamutemo kana yekutengeserana kweumwe munhu wechitatu;
Mashoko acho haana zvinyorwa zvinopesana, zvakashata, zvinokuvadza, zvisingabvumirwi kana zvimwe zvisiri pamutemo izvo zvinopinda munharaunda
Mashoko acho haazoshandiswa kukumbira kana kukurudzira bhizimisi kana tsika kana zvemazuva ano mabasa ekutengeserana kana basa risina mutemo.
Iwe unopa izvi 192.168.8.1 rezinesi isingasarudzwe yekushandisa, kuberekesa, kugadzirisa nekupa mvumo vamwe kuti vashandise, kubereka nekugadzirisa chero maKomenti ako mune chero uye ese mafomu, mafomati kana midhiya.
Misangano inotevera inogona kuwirirana neIndaneti yedu pasina kubvumirwa kwakanyorwa kare:
Nhamba yepaIndaneti vatengesi vanogona kuwirirana neIndaneti yedu nenzira imwecheteyo sezvavanosangana nayo kune mamwe mazita emamwe mabhizinesi akanyorwa; and
Sangano rakawanda rakagamuchirwa mabhizimisi kunze kwekukumbira masangano asiri ezvemari, zvivako zvekutsvaga mabhizimusi, uye zvorudo zvidzidzo zvemazana zvingasave zvakanatswa pawebsite yedu.
Aya masangano angabatana nepeji remba redu, kune mabhuku kana mamwe mawebhuku ewebhuku chero bedzi kubatana: (a) hakusi munzira ipi neipi inonyengera; (b) hazvirevi zvenhema kutsigira, kubvumirwa kana kubvumirwa kwekambani inobatanidza uye zvigadzirwa zvayo uye / kana mabasa; uye (c) inopindirana mukati memamiriro ezvinhu epakati pebato rekubatanidza.
Tingafunga uye tibvumira zvimwe zvikumbiro zvekubatanidza kubva kumarudzi anotevera emasangano:
kazhinji-anozivikanwa mutengi uye / kana bhizinesi ruzivo rwemashoko;
masangano kana mamwe mapoka anomirira zvipo;
kuverenga, mutemo uye mazano emakambani; and
masangano ekudzidzisa uye masangano ekutengeserana.
Tichabvumidza zvikumbiro zvekubatanidza kubva kumasangano aya kana tikasarudza kuti: (a) chinongedzo hachiite kuti titarisike zvisina kunaka kwatiri kana kumabhizinesi edu anozivikanwa; (b) sangano harina zvinyorwa zvisina kunaka nesu; (c) iyo bhenefiti kwatiri kubva pakuonekwa kweiyo hyperlink inobhadhara kusavapo kwe 192.168.8.1; uye (d) chinongedzo chiri mumamiriro eruzivo ruzivo
Aya masangano angabatana nepeji rekumba kwedu chero bedzi kusangana: (a) hakusi munzira ipi neipi inonyengera; (b) hairevi zvenhema kutsigira, kubvumirwa kana kubvumirwa kwekambani inobatanidza uye zvigadzirwa zvayo kana mabasa; uye (c) inopindirana mukati memamiriro ezvinhu epakati pebato rekubatanidza.
Kana iwe uri mumwe wemasangano akanyorwa mundima 2 pamusoro uye uchifarira kubatanidza kune webhusaiti yedu, unofanira kutitaurira nekutumira e-mail ku 192.168.8.1. Ndokumbirawo ubatanidze zita rako, zita resangano rako, ruzivo rwekuonana pamwe neiyo URL yeyako saiti, runyorwa rwe chero ma URLs aunofunga kubatanidza kune yedu Webhusaiti, uye runyorwa rwema URL pane yedu saiti kwaungade batanidzo. Mirira 2-3 mavhiki kuti upindure.
Masangano anogamuchirwa angave hyperlink kuWebsite yedu sezvinotevera:
Nokushandiswa kwezita rekambani; kana
Nokushandiswa kweyunifomu inowanikwa mudziyo inosanganiswa; kana
Nokushandiswa kweimwe imwe tsanangudzo yeIndaneti yedu yakabatanidzwa kune iyo inonzwisisika mukati mekukomberedza uye kuenzaniswa kwezvakagadziriswa paiti yebato rekubatana.
Hapana kushandiswa kweiyo 192.168.8.1's logo kana imwe mifananidzo ichave ichibvumidzwa yekubatanidza asipo chisimboti chekutengeserana chibvumirano.
Pasina kugamuchirwa mvumo uye mvumo yakanyorwa, iwe haugoni kuumba mapurisa akakomberedza maWebhu edu anochinja nenzira ipi neipi yekuratidzira kana kuonekwa kweWebsite yedu.
Hatisi kuzobata mhosva kune zvinyorwa zvose zvinowanika paIndaneti yako. Iwe unobvuma kudzivirira nekudziviririra isu pamusoro pemhosva dzose dziri kuwedzera paWebsite yako. No Link (s) vanofanira kuonekwa chero Website kuti kungadudzirwa sezvo libelous, majee kana mhosva, kana iyo infringes, zvikasadaro anoputsa, kana vamiriri kuti kukanganisa kana mamwe kutyorwa, chero rechitatu bato kodzero.
Tinochengetedza kodzero yekukumbira kuti ubvise mashizha ose kana chero humwe humwe hunobatanidza kuWebsite yedu. Iwe unobvuma kuti ubvise kamwe mazano ose kuIndaneti yedu pakukumbira. Isu tinochengetedzawo kodzero yekuti ameni aya mazwi nemamiriro ezvinhu uye iri kubatanidza mitemo panguva ipi zvayo. Nokuramba tichibatanidza kuIndaneti yedu, unobvumirana kuti uzvisungirire uye uchitevedza mazwi aya nemibatanidzwa.
Kubviswa kwezvikwata kubva pawebsite yedu
Kana iwe ukawana chero chibvumirano paIndaneti yedu inopesana nechikonzero chipi nechipi, iwe wakasununguka kuti utaure uye utitaurire chero nguva. Tichaona zvikumbiro zvekubvisa michina asi isu hatisi kusungirwa kuti kana zvakadaro kana kuti tipindure kwauri zvakananga.
Hatisi kuvimbisa kuti ruzivo rwewebsite ino rwakarurama, hatirevi kukwana kwaro kana kukwana; kana kuti hatingavimbisi kuve nechokwadi chokuti webhusaiti yacho inoramba ichitsvaga kana kuti mashoko ari pa webhusaiti inochengetwa kusvika panguva.
Kusvika pamwero mukuru unobvumirwa nemutemo unoshanda, tinosanganisa zvose zvinomiririra, zvivimbiso nemitemo ine chokuita newebsite yedu uye kushandiswa kwewebsite ino. Hapana chinhu chiri mubhuku rino chicha:
kupedza kana kusanangurira isu kana mutoro wako wekufa kana kukuvara kwega;
kupedza kana kusabvisa dare redu kana chekuita nekunyengera kana kunyengera kusakanganiswa;
kupedza chero ipi zvayo kana zvikwereti zvako nenzira ipi zvayo isina kubvumidzwa mutemo unoshanda; kana
kusanganisa chero ipi zvayo kana zvikwereti zvako zvisingasanganiswi pasi pemutemo unoshanda.
Kukanganisa nekurambidzwa kwemhosva inenge iri muChikamu uye kune dzimwe nzvimbo muzvinyorwa izvi: (a) inotungamirirwa nendima yapfuura; uye (b) kutonga zvose zvikwereti zvinowanikwa pasi pekuregererwa, kusanganisira zvikwereti zvinokonzerwa nechibvumirano, mukukanganisa uye nekuputsa mutemo wepamutemo.
Chero bedzi iyo webhusaiti uye ruzivo nemashandiro pawebsite yepaIndaneti zvakapiwa pachena, hatingavi nemhosva kune kurasikirwa kana kukanganisa kwemhando ipi zvayo.